काठमाडौंमा झुल्किँदा केशुमाथि आशंका…! | Screennepal
काठमाडौंमा झुल्किँदा केशुमाथि आशंका…!
२०७५, २४ मंसिर सोमबार ०७:३६screennepalfeature, Music0
काठमाडौं । गायिका तथा स्वास्थ्यकर्मी केशु गुरुङ यो साता अचानक काठमाडौंमा टुप्लुक देखिइन् । तनहुँ, धरमपानीकी यी गायिकाले दमौलीलाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएकी छन् । उनी हत्तपत्त काठमाडौंमा देखिँदिनन् । जब उनी यहाँ देखिन्छिन्, तब केही न केही गरेकी हुन्छिन् ।
केही समयअघि काठमाडौंमा आउँदा केशुले आफ्नो कौरा गीत ‘बुकी फूल’ सार्वजनिक गरेकी थिइन् । केही विशेष काम लिएर मात्र काठमाडौंमा पाइला टेक्ने गरेकी केशु यसपटक किन आइन् त ? जवाफमा उनले भनिन्, ‘दुर्गा गुरुङ दाईको एकल साँझमा सहभागी जनाउन आएकी हुँ ।’
गुरुङ समुदायका चर्चित गायक तथा ‘कौरा सम्राट’को उपाधि पाएका दुर्गा यही गएको शनिबार राजधानीमा एकल साँझमा प्रस्तुत भएका थिए । गायिका केशु उक्त कार्यक्रमकै लागि विदा मिलाएर काठमाडौं आएकी रहिछिन् ।
दमौलीस्थित एक गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध रहि स्वास्थ्य सेवामार्फत सामाजिक सेवा गर्दै आएकी केशुले भनिन्, ‘आउनैपर्छ भन्ने त थिएन । तैपनि दाईको कार्यक्रम भएकाले आएकी हुँ ।’ उनले एक कलाकारको कार्यक्रममा उपस्थित भएर हौसला बढाउनु भनेको सम्मानसमेत भएको बताइन् ।
स्वास्थ्यकर्मीसँगै ‘कौरा गायिका’को पहिचान बनाएकी केशुले भनिन्, ‘म कलाकारलाई सम्मान गर्छु । हुन त मेरो पेसा कलाकारिता होइन । म गीत गाउँछु तर, गायन मेरो पेसा होइन । तैपनि कला क्षेत्र र कलाकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु ।’
गायिका केशुले आफूलाई गायिका भन्न नरुचाएका पनि उनका कौरा गीतहरु लोकप्रिय छन् । उनलाई पछिल्लो समय गुरुङ समुदायमा मात्र नभएर सांगीतिक क्षेत्रमै ‘कौरा गायिका’का रुपमा चिन्छन् ।
सातैदिन जस्तो एचआईभी संक्रमितहरुको स्वास्थ्य सेवामा व्यस्त हुने केशुले बेला–बेला मात्र काठमाडौं टेक्नुको कारण पनि यही हो । तर, उनी जब कठमाडौंआउँछिन्, त्यसैबेला उनी कौरा गीत रर्कड गर्छिन् । त्यसैले उनी काठमाडौं आउनेवित्तिकै मान्छेहरुले अनुमान गर्छन् कि, ‘केशुले पक्कै केही नयाँ काम गर्दैछिन् ।’ यसपटकको उनको काठमाडौं यात्रामा पनि यही आशंका गरिएको थियो । तर, उनले यसपटक गीत रेकर्डिङको काम नभएको स्पष्ट पारिन् ।
पछिल्लो समय रिलिज भएका केशुका ‘झिल्के भेना’, ‘बुकी फूल’लगायतका कौरा गीत चर्चामै छ । जसले गर्दा पनि उनी तत्काल नयाँ गीत ल्याउने मनशायमा छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘गायन मेरो रहरमात्र हो । त्यसैले महिनैपिच्छे गीत रर्कड गर्नु मलाई आवश्यक छैन । वर्ष दिनमा एउटा गीत गाए पुग्छ मलाई ।’ उनी केही समयपछि कौरा र एक पुर्वेली लोकगीत ल्याउने सोचमा छिन् । अहिले त्यसैको तयारी गरिरहेको बताउँदै भनिन्, ‘थोरै गाउने तर स्तरिय होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो । अहिले त्यसैअनुसार तयारी गर्दैछु ।’
दमौलीमा उनी कार्यरत संस्था कम्युनिटी सर्पोट गु्रपले विशेषगरी गण्डक क्षेत्रलाई कार्य थलो बनाएर एचआईभी संक्रमितहरुको तथ्यांक संकलन तथा उपचार सेवा गर्दै आएको छ । त्यसैले पनि उनी प्रायः व्यस्त हुने गर्छिन् । केशु भन्छिन्, ‘कार्यालयमा मात्र नभएर बेला–बेला हामी फिल्डमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि गायनलाई पेसा नै बनाउँछु भन्दा पनि समय मिल्दैन ।’
केशुले आफ्नो लागि पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा भएको भन्दै भनिन्, ‘रहरै रहरमा गीत गाउन सुरु गरेकी हुँ । तर, अहिले गायिका भनेर चिनिन थालेकी छु । यसमा खुसी लाग्छ ।’
विशेषगरी आफ्नो गुरुङ समुदायको संस्कृति पहिचान र प्रर्वद्धनलाई जोड दिँदै आएकी केशु भन्छिन्, ‘यहाँ गाएरमात्र बाँँच्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले मेरो लागि अहिलेको अवस्था ठीक छ । मन लाग्यो भने गाउँछु, लागेन भने गाउँदिनँ ।’
तर, पछिल्लो समय उनले गाएका कौरा गीतहरु चर्चामा आइरहेका छन् । जसले गर्दा उनलाई देश–विदेशको कार्यक्रमबाट समेत प्रस्तुतिका लागि प्रस्तावहरु आउन थालेको छ । केशुले भनिन्, ‘हिजोआज मलाई विदेशबाट समेत कार्यक्रमका लागि अफर आउन थालेको छ । केही देशमा फिक्स समेत भइसकेको छ ।’
Previous Postबेलायतबाट हलिउड ट्रेनिङ इन्सिच्युटले बनायो नेपाली कलाकार सहितको आकर्षक भिडियो Next Postअर्जुन र पवित्राको ‘वैशालु नजर’